यस्तो अवस्थामा भुलेर पनि नखानुहोस् केरा, ज्या’ नै जान सक्छ ! एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला – Annapurna Daily
यस्तो अवस्थामा भुलेर पनि नखानुहोस् केरा, ज्या’ नै जान सक्छ ! एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला
On Jun 17, 2021 20,819
एजेन्सी । केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक फलफूल मानिन्छ। यसमा पोसेसियम, म्याग्नेसियम, भिटामिन बी-६ लगायत हुन्छ। तर, केही यस्तो अवस्थामा केरा खानुहुँदैन, जसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ :-
केरामा बढी मात्रामा सुगर, कार्बोहाइड्रेड, क्यालोरी पाइन्छ। यसले गर्दा शरीरमा मोटोपन बढ्न सक्छ। केरामा पोटासियम बढी मात्रामा हुन्छ । यसले गर्दा असामान्य रूपमा मुटुको धड्कन बढ्न सक्छ।
यसले एन्जाइटीजस्तो समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । याद गर्नुहोस्, मानिसमा एन्जाइटी भयो भने निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने आदि लक्षण देखिन्छ।
केरामा पाइने थायमिन नामक तत्वले माइग्रेन र टाउको दुख्ने समस्या बढ्न सक्छ। केरामा भिटामिन बी-६ हुन्छ । यसले स्नायु प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ।
केरामा गुलियोको मात्रा निकै बढी हुन्छ। यसले डाइबिटिज अर्थात् सुगर हुने सम्भावना बढ्छ भने यो रोग भएकाहरूको लेभल बढ्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुस: यी खानाहरु नियमित बढी खाए सिधै हुन्छ मृगौला ड्यामेज, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ?
एजेन्सी । हामी सबैलाई थाहा छ कि मानब शरीरको महत्वपुर्ण अङगहरू मध्य जीवित रहनको लागि चाहिने अति नै महत्वपूर्ण अंगहरु मुटु, कलेजो,मृगौला,फोक्सो, मस्तिस्क, आदी हुन ।
यी सबै अङगहरुलाई स्वस्थ्य राख्नको लागी हामिले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यो पोस्ट मृगौलालाई असर गर्ने खानाहरुको बारेमा रहको छ जुन तपाईले बुझ्नु अतिनै जरुरी छ। अर्थात यहाँ केही खानेकुरा को नाम छन जुन खानाहरू धेरै खाँदा वा पिउदा सोझै मृगौला लाई असर गर्दछन ।
यी खानाहरु नियमित बढी खाए सिधै मृगौला ड्यामेज: हामी सबैलाई थाहा छ कि मानब शरीरको महत्वपुर्ण अङगहरू मध्य जीवित रहनको लागि चाहिने अति नै महत्वपूर्ण अंगहरु मुटु, कलेजो,मृगौला,फोक्सो, मस्तिस्क, आदी हुन।
त्यसैले चिनी धेरै खाने बानी आजै बाट त्याग्नुहोस । यदि कहिले काही मात्र खानु हुन्छ भने त्यति फरक नपर्ला तर दैनिक ३ देखि ४ पटक चिया पिउदै पिच्छे धेरै चिनी खाने बानी छ भने यो अब तपाइले कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ । एजेन्सीको सहयोगमा